Guud - Guangdong Meiling Internet Technology Co., Ltd.
Guangdong Meiling Internet Technology Co., Ltd waxaa la aasaasay 2009, ka dibna wuxuu soo saaray shirkad wadashaqeyn oo leh tiir wax soo saar iyo cilmi baaris, ganacsiga elektarooniga ah, iskuxirka iibsashada hadiyadaha iyo howlgalka sumadda.
Shirkadeena ayaa isku dhafan kheyraadka iyo faa'iidooyinka si daacadnimo, iimaan iyo hami leh. Muddo dhowr sano ah, Meiling waxay ku guuleysatay kobcin joogto ah oo gobolka ah iyadoo la sahamiyay qaab ganacsi xilligii internetka, iyadoo lala kaashaday shirkadaha gudaha iyo dibaddaba caan ku ah. Waqtigaan la joogo, Meiling wuxuu leeyahay fadlan noocyo badan oo internet ah- Konka, Changhong, Nontaus, Daewoo, TER, MAK, BTSM. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay meeleyn u gaar ah oo suuq ah, si uu si weyn ugu qanciyo dadka khibrada u leh ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ka socda dhinacyo kala duwan oo si guul leh loogu abuuro “Meiling Internet +” “platform”. Xilliga internetka, "Meilling Internet +" waxay gacan ka geysaneysaa in loo beddelo ganacsi dhab ah oo internetka ah, si wadajir ah loo abuuro guul-guul-waddo leh tartan asaasi ah oo daacadnimo ah.In ka badan 10-sano koritaan, waxaan ku soo aragnay ODM iyo sidoo kale OEM. Iyada oo wax soo saarkeena iyo adeegyadeena caymiska ah, waxaan la dhignay iskaashi ganacsi oo wanaagsan macaamiisha ku sugan suuqa gudaha iyo dibedda.
“Meiling Internet +” waxay ku xidhan tahay inay hage u noqoto habka ganacsiga ee had iyo jeer isbedelaya mustaqbalka.
Meiling waa xirfadleyaal alaab-qeybiyeyaal ah oo guryaha ka shaqeeya oo ay ka mid yihiin qalabka jikada, qalabka guryaha, qaboojiyaha, nadiifinta iyo nadiifinta, waxaan ka shaqeyneynay qalabka guryaha ee Shiinaha in ka badan 10 sano. Ka sokow in la abuuro Internet firfircoon oo heer sare ah + Nidaamka Deegaanka. Waxaan sidoo kale helnay ikhtiyaarro loo habeeyay si aan uga caawino macaamiisha sidii ay ugu fiicnaan lahaayeen silsiladdooda sahayda ee marinno kala duwan.
Kooxdayada iibka waxay ku dadaalayaan inay ku qanciyaan macaamiisha adeegyo aad u fiican. Intaa waxaa dheer, iyada oo ku saleysan xiriirka dhow ee aan la leenahay macaamiisha, waxaan had iyo jeer ka heli karnaa macluumaadka gacanta ugu horreysa suuqa oo aan ku horumarin karnaa moodello cusub oo sax ah si loo daboolo baahida macaamiisha.Sannad kasta, waxaan horumarin karnaa 3-5 shey oo cusub iyadoo la raacayo isbeddellada suuqyada iyo shuruudaha macaamiisha, taas oo si weyn u xoojineysa tartankeenna suuqa oo ku saleysan oraahdeena macquulka ah. In ka badan 10-sano koritaan, waxaan ku soo aragnay ODM iyo sidoo kale OEM. Iyada oo wax soo saarkeena iyo adeegyadeena caymiska ah, waxaan la dhignay iskaashi ganacsi oo wanaagsan macaamiisha ku sugan suuqa gudaha iyo dibaddaba si diiran ayaa loo soo dhaweynayaa. Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah waxyaabahayaga ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Waxaan rajeyneynaa inaan kulashaqeyno mustaqbalka dhow.
Tartamada Suuqa Weyn
Silsilad sahay kala duwan
Horumarinta Wax soo saarka & Teknolojiyadda
Miyaad La kulmi Kartaa Dhibaatooyinka?